<<first <prev 123456(7) 8910 next> last>>
Hot News-19 Feb 2011
Posted By - Ko Ko - February 18, 2011
ဖက်ရှင် အရောင်း လုပ်ငန်း BOONTHESHOP နဲ့ Song Hye-kyo (အွန်စော) တို့ပူးပေါင်း ပြီး ၅ နှစ်တာ ရိုက်ထားတဲ့ မင်းသမီး ရဲ့ ဓါတ်ပုံများ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။
အုပ်ရေ ၂၀၀၀ သာထုတ်ဝေ ခဲ့ပြီး တစ်အုပ်ကို US$ 108 နဲ့ရောင်း ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် ရောင်းလို့ ရတဲ့ ငွေကို အလှူငွေ အဖြစ် သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hyeon Bin volunteers to join Marine Corps
Hyeon Bin စစ်ထဲဝင်တော့မည်
မင်းသား Hyeon Bin (29) ဟာ ကိုးရီးယား နိုင်ငံရဲ့ မဝင် မနေရ စစ် ဥပဒေ အရ မကြာမှီမှာ ၂နှစ် စစ်မှုထမ်း တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားဟာ ကိုးရီးယား Marine တပ်ဖွဲ့မှာ ဝင်ရန် လျှေက်လွှာ တင်ထား တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Hyeon Bin... gets permission to step on the Berlin Red Carpet
'Oska' socks selling for 4000won
မကြာမှီ က ပြပြီး သွားတဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ Gil La-im (မင်းသမီး Ha Ji-won) ဟာ သူအလွန် နှစ်သက်တဲ့ အဆိုတော် Oska (Yoon Sang Hyun) ရဲ့ ပုံပါတဲ့ ခြေအိတ် ကို ဖက်ရှင် အဖြစ် ဝတ်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ဒါကို မိန်းခလေး တွေက ကြိုက်နှစ်သက် ကြလို့ 'Oska socks' လို့အမည် ပေးထားတဲ့ အလားတူ ခြေအိပ် တွေကို တစ်စုံ won 4000 နဲ့ ဆိုင်တင် ရောင်ချ ပေးနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : 'Oska' socks that made Hyeon Bin jealous selling for 4000won
Jang Dong-gun, Ha Ji-won, Hero
get together in "10 Billion drama"
Jang Dong-gun, Ha Ji-won
နဲ့ Hero တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
Jang Dong-gun, Ha Ji-won နဲ့ Hero တို့ သုံးဦး ပေါင်းပြီး "Hanbando - Drama" လို့ အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ 10 billion won ကုန်ကျ မှာဖြစ်ပြီး လာမည့် ဇူလိုင် လမှာ စတင် ရိုက်ကူးခါ အောက်တိုဘာ လမှာ ပြသ မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun, Ha Ji-won, Hero get together in "10 Billion drama"
Lee Seo-jin appointed as director
of Asset Management company
မင်းသား Lee Seo-jin ရဲ့ မိသားစု ဟာ လုပ်ငန်းရှင် များဖြစ်ကြ ပါတယ်။ မင်းသားဟာ New York University က "Diploma in Management" ရထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးက Seoul Bank နဲ့ Jae-il Bank တို့ရဲ့ President ဖြစ်ပြီး၊ အဖေက Ahn Heung Mutual Trust Safe လုပ်ငန်းက အရာရှိ တစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ်။
Ask Veritas Assets Management က မင်းသား Lee Seo-jin ကို ၄င်းတို့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ "Global Contents2 Director of Headquarters" အဖြစ် ခန့်အပ်ကြောင်း မကြာမှီက ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ ပါတယ်။
Source : Lee Seo-jin appointed as director of Asset Management company
Kim Jae-wook - We will bearock
band with no compromise
ကျွန်တော်တို့ကတော့ Rock Band
မင်းသား Kim Jae-wook ဦးစီးတဲ့ "WALRUS" Rockband ရဲ့ ပထမ ဆုံး Fan Meet ကို Japan နိုင်ငံ Sibuya CC Lemon Hall မှာ မကြာမှီက ပြုလုပ် ခဲ့ရာ fans ၂၀၀၀ ကျော် တက်ရောက် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင် သီဆို တီးမှုတ် မှာဖြစ်ပြီး၊ အင်အား အပြည့် စိုက်ထုတ် သွားမှာ ပါလို့ fans များကို မင်းသားက ပြောကြား သွားပါတယ်။
Source : Kim Jae-wook "We will bearock band with no compromise"
အဆိုတော် BaO (25) ဟာ အမေရိကန် မင်းသား Derek Hough ("Dancing with the Stars", "Footloose: The Musical") နဲ့တွဲဖက် ပြီး 'COBU 3D' အမည် ရှိတဲ့ dance movies တစ်ကား ကို ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ရိုက်ကူး တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ကတော့ "Save the Last Dance", "Step Up" စတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင် များကို ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Duane Adler ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ကူးမှာ ကတော့ 3D dance movie ဖြစ်ပြီး love story ဖြစ်ပါတယ်။ Toronto နဲ့ New York တို့မှာ လာမည့် နွေဦးမှာ စတင် ရိုက်ကူး မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : BoA to Debut in Hollywood
Hyeon Bin Stops Traffic in Downtown Seoul
အလွန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတဲ့ Hyeon Bin
မကြာမှီ က ပြသလို့ ပြီးသွားတဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ ပြီးနောက်မှာ မင်းသား Hyeon Bin (29) ဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာ ပါတယ်။
Seoul မြို့ Sogong-dong ရပ်ကွက် Lotte Department Store မှာ မင်းသား ဟာ autographs ထိုးပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသားကို တွေ့ဖို့ လာတဲ့ ပရိသတ် ကများလွန်း လို့ ရပ်ကွက် တစ်ခုလုံး ယာဉ်ကြောတွေ ပိတ်ဆို့ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ရာသီဥတု ဟာ သုညအောက် ရောက် နေသော်လည်း လူအုပ်က အစောကြီးထဲက ရောက်နေ ပါတယ်။ ဂျပန်က fans အများ အပြားလည်း အထူး အစီအစဉ် နဲ့ ရောက်လာ ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
USA မှာ မင်းသားဟာ တရုတ် မင်းသမီး Tang Wei (31) နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ လမှာ "Late Autumn - 2010 (Manchu)" အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ရိုက်စဉ် ကလည်း၊ ရိုက်ကွင်း မှာရှိတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသမီး များအကြား မှာ အလွန်မှ ရေပန်းစား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းသားဟာ ကြော်ငြာလည်း အလွန် ရိုက် နေရတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Hyeon Bin Stops Traffic in Downtown Seoul
Actor Hyeon Bin is on the rise in America, too
Hyeon Bin The Advertisement King
Jo In-seong Received Appreciation Plaque
For His Role As Promotions Ambassador
စစ်ထဲရောက်နေတဲ့ Jo In-seong ရဲ့သတင်း
မင်းသား Jo In-Seong ဟာ ၂ နှစ် မပြည့် သေးလို့ စစ်မှုထမ်း နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ် နဲ့ လူထု အကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့ အတွက် မင်းသားမှ ဆောင်ရွက် ခဲ့မှုများ အတွက် ကျေးဇူးတင် အသိအမှတ် ပြုလွှာကို Korea Military Administration မှ မင်းသားအား ပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသားဟာ ၂၀၀၉ ဧပြီး မှာ တပ်ထဲသို့ ဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ မေလ ၄ ရက်နေ့မှာ ၂ နှစ် ပြည့်မြောက် တဲ့အတွက် တပ်ကနေ ထွက်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Jo In-seong Received Appreciation Plaque For His Role As Promotions Ambassador
နာမည်ကြီးသထက်ကြီးလာတဲ့ Ha Ji-won
မကြာမှီ က ပြသ ပြီးသွားတဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ Gil Ra-im အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Ha Ji-won ဟာ အလွန်မှ ပေါ်ပြုလာ ဖြစ်လျက် ရှိပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ Secret Garden ရိုက်လို့ ပြီးဆုံး ပြီးနောက်၊ Ha Ji-won ဟာ တစ်ရက် လုံးလုံး ခြေပစ် လက်ပစ် အနားယူ ခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်မဟာ အိမ်မက် ကနေ နိုးထ လာသလို ဖြစ်နေ ပါတယ်၊ အိပ်ယာ ကနေ သေသေ ချာချာ မနိုး သေးတဲ့ သူလို ဖြစ်နေ ပါတယ်" လို့ မင်းသမီး က ပြောသွား ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်နေစဉ် သူ့ကိုယ်သူ ဇါတ်ကောင် Gil Ra-im အဖြစ် နေရော ညပါ ဈာန်သွင်း ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အက်ရှင်ခန်း အတော် များများကို ကိုယ်တိုင် လူစား မထိုးပဲ သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် က အမေရိကန် မင်းသမီး Angelina Jolie ကဲ့သို့ စတန့် အက်ရှင် ခန်းတွေကို ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင် ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Ha reflects on the success of 'Secret Garden'
Choi Ji-woo ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသမီး Choi Ji-woo ဟာ Medical College အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Star's Lover (2009) ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ပြီး ကတည်းက Choi Ji-woo ဟာ ကားဆက် ပြတ်နေတာ ၂နှစ် လောက်ရှိ သွားပါပြီး။ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ၂၀၁၁ နှစ်လယ် လောက်မှာ ရိုက်ကူး မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Choi Ji-woo to come back with "Medical College"
Rain, "can load pictures on Twitter"
escapes computer illiteracy
Rain ကွန်ပျူတာသုံးတတ်ပြီး :-)
ကွန်ပျူတာ " အသုံးလုံး" မကျေသူ လို့ နာမည်ကြီး နေတဲ့ မင်းသား Rain ဟာ "ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ နဲ့ ဓါတ်ပုံ upload လုပ်နိုင်ပြီး" လို့ရပြီး လို့ twitter မှာရေးတယ် ဆိုပဲ။
ကွန်ပျူတာ " အသုံးလုံး" မကျေ ကြောင်း ကို သူကိုယ်တိုင် ဝန်ခံ ထားရာက အခုတော့ နည်းနည်း သုံးတတ် လာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (Congratulation Rain)
Source : Rain, "can load pictures on Twitter" escapes computer illiteracy
Yoon Eun-hye reveals more uniform
pictures "When will I wear it again?"
Yoon Eun-hye ကျောင်းသူဝတ်စုံနှင့်ပုံများ
မင်းသမီး Yoon Eun-hye ဟာ My Black Mini Dress လို့အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်နေ ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျောင်းသူလေး အသွင်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မှာဖြစ် ပါတယ်။
သူ့ agency က ဒီရုပ်ရှင် ထဲက နမူနာ ပုံတွေကို ထုတ်ပြန် ပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီး ဖြစ်တဲ့ Yoon Eun-hye ဟာမ ယုံနိုင် လောက်အောင် ငယ်နေ ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင် ကားမှာ Yoon Eun-hye ဟာ Lee Yong-woo, Park Han-byeol, Cha Ye-ryeon, Yoo In-na နဲ့ U-Kiss အဆို အဖွဲ့ မှ Dong Ho တို့နဲ့ အတူ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။
Source : Yoon Eun-hye reveals more uniform pictures "When will I wear it again?"
Lee Young-ae, pregnant with boy.girl twins
နာမည်ကျော် "နန်းတွင်ရတနာ" ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ ချန်ဂင် အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ Lee Young-ae ဟာ မကြာမှီ က လက်ထပ် ခဲ့ပါတယ်။
အခု ကိုယ်ဝန် ရှိနေလို့ စစ်ဆေး ကြည့်တဲ့ အခါမှာ၊ ယောက်ကျားလေး နဲ့ မိန်းခလေး အမွှာ မွေးမယ်လို့ သတင်းရရှိ ပါတယ်။
Kim Tae-hee, pretty short cut
ဆံတိုလေးနဲ့ Kim Tae-hee
My Princess (MBC) အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ episode7မှာ မင်းသမီး Kim Tae-hee ကို ချစ်စဖွယ် ဆံတို လေးနဲ့ တွေ့ရ ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ ဆံပင် ဖြတ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါ၊ ဆံပင် အတု (wig) ဝတ်ပြီး သရုပ် ဆောင်တာလို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee, pretty short cut... energy fight with Park Ye-jin
Koo Hye-seon, directs Seoul International
Female Film Awards official trailer
Koo Hye-seon ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရခြင်း
သက်ဆိုင်ရာ တို့က ၁၃ ကြိမ်မြောက် Seoul International Female Film Awards ပွဲတော် အတွက် ကြော်ငြာ trailer ရိုက်ဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။
ဒီ ကြော်ငြာ trailer ရုပ်ရှင် ရဲ့ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် မင်းသမီး Koo Hye-seon ကို ခန့်အပ် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Koo Hye-seon, directs Seoul International Female Film Awards official trailer
"My Princess" Song Seung-heon and
Kim Tae-hee, heart throbbing first kiss
ဂျွန်စော နဲ့ Kim Tae-hee တို့ရဲ့ပထမဆုံးအနမ်း
My Princess (MBC) အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ episode7မှာ မင်းသား Song Seung-heon (ဂျွန်စော) နဲ့ မင်းသမီး Kim Tae-hee တို့ရဲ့ ကြယ်ပွင့်များ ထွက်လောက်တဲ့ kiss scene ပါလာတဲ့ အတွက် ပရိသတ် တွေ အတော် လှုပ်လှုပ် ရှားရှား ဖြစ်သွား ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : "My Princess" Song Seung-heon and Kim Tae-hee, heart throbbing first kiss
Jeong Woo-seong injured while filming 'Athena'
Athena မင်းသား Jeong Woo-seong ဒါဏ်ရာရခြင်း
Athena ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ ခေါင်းဆောင် မင်းသား Jeong Woo-seong ကားရိုက် နေစဉ် accident ဖြစ်လို့ အနီးဆုံး ဆေးရုံသို့ ခေါ်သွားပြီး ခေါင်းက ဒါဏ်ရာကို ချုပ်လိုက် ရတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Jeong Woo-seong injured while filming 'Athena'
Jeong Woo-seong accident filming "Athena" emergency room
Fans များနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့ Son Ye-jin
မင်းသမီး Son Ye-jin ဟာ သူ့ရဲ့ ၂၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲ ကို Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, China, Australia နဲ့ USA တို့မှ fans များနဲ့ ဇန်နဝါရီ လ ၂၃ ရက်နေ့က Seoul မြို့ Yaksu-dong ရပ်ကွက်ရှိ Musical House မှာ ကျင်းပ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Son Ye-jin Celebrates Birthday With Fans
Actor gets4years for drug use
မင်းသား Kim Seong-min ကို မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှူ နဲ့ တရားရုံးက ထောင်ဒါဏ် ၄နှစ်နဲ့ ဒါဏ်ငွေ ဝမ် ၉၀၄၅၀၀ (US$ 900) ပစ်ဒါဏ် ချမှတ် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မင်းသား Kim Seong-min ကို Lotus Flower Fairy (MBC, 2004), "ချိုဝမ်" ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မင်းသား အဖြစ် မြန်မာ ပရိသတ် သိရှိ ရင်းနှီး ခဲ့ပါတယ်။
Prison for actor caught with drugs
Lee Joon-ki, Salutes in new uniform
မင်းသား Lee Joon-ki ဟာ သူ့ရဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်း နဲ့ပုံကို ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က Twitter မှာ upload လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
"နိုင်ငံ တဝှမ်းရှိ ပရိသတ် များ ရွှင်လန်း ကျန်းမာ ကြပါစေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ ပြင်ပမှာ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ဖို့ အချိန် နီးကပ်လို့ လာပါပြီး" လို့မှတ်ချက် ပြုထား ပါတယ်။
မင်းသားဟာ ယခု တပ်မတော် ရေဒီယို အစီအစဉ် မှာ DJ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေပါတယ်။
Source : Lee Joon-ki, Salutes in new uniform "Time to meet again getting close"
အလွန် အေးတဲ့ ဆောင်းရာသီ မှာ ကိုးရီးယား အနုပညာ သည်များဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲ များ ရက်ချိန်း မှီစေရန် အတွက် ပြင်ပမှာ ချမ်းချမ်း စီးစီး ပင်ပင် ပန်းပန်း အလုပ်လုပ် ကြရ ပါတယ်။
Queen of Reversals (MBC) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Park Si-hoo ဟာ သွားဖုံး များရောင် လာလို့ ဆေးရုံ ပို့ပြီး ၂ ရက်အနား ယူခဲ့ ရပါတယ်။
Dream High (KBS 2TV) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ Tacyeon ဟာ နှာခေါင်းသွေး မကြာခဏ ထွက်ပြီး နာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ၄င်း ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ Kim Soo-hyeon-I ဟာလည်း ပင်ပန်းပြီး ပစ်လဲ သွားလို့ ဆေးရုံ ပို့ခဲ့ ရပါတယ်။
Sign (SBS) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ Park Shin-yang ဟာ ခြေထောက်များ ရောင်လာလို့ ချိုင်းထောက် နဲ့ လှုပ်ရှား နေရ ပါတယ်။ သူက Twitter မှာ "ဆက်ရိုက် နေရတုံး ပါပဲ၊ ဘယ်သူမှ မအိပ် ရတာ တော်တော် ကြာသွားပါပြီး၊ ဘယ်သူ အရင် မေ့လဲ မယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့် နေကြ သလို ပါပဲ" လို့ရေး သွားပါတယ်။
Source : Actors shiver in the cold
JYJ Fans Show Their Support
JYJ ကို Fans များမှဝိုင်းပန့်ပိုးနေကြသည်
အဆိုတော် Jaejoong, Yoochun နဲ့ Junsu က တဖက် သူတို့ရဲ့ agency ဟောင်း SM တို့က တဖက်၊ ဖြစ်နေ ကြတဲ့ "တရားမ" မှုဟာ ၆လ ကြာသွား ခဲ့ပါပြီး။
သူတို့ရဲ့ fans များဟာ အားပေးဖို့ အတွက် online မှာ ရံပုံငွေ စုခဲ့ရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ 140 million won စုဆောင်း နိုင်ခဲ့ကြ ပါပြီး။
ပရိသတ် အကြားမှာ ဒီသုံးယောက် ဆက်လက် ထင်ပေါ် နေဖို့ အတွက်၊ သူတို့ အကြောင်း နဲ့ သီချင်း တွေကို အဆက် မပြတ် ထုတ်လွှင့် နိုင်စေရန်၊ စုဆောင်း ရရှိငွေ နဲ့ internet radio station တစ်ခု တည်ထောင် ကြမယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : JYJ Fans Show Their Support
Girl Group "KARA"'s Breakup Crisis
Kara အဖွဲ့မှ အဆိုတော် များဖြစ် ကြတဲ့ Han Seung-yeon, Nicole Jung နဲ့ Kang Jiyoung တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အေးဂျင့် DSP Media နဲ့ စကားများ နေကြပါတယ်။ Park Gyuri နဲ့ Goo Hara ပဲ DSP Media အေးဂျင်စီ ဖက်မှာ ကျန်ခဲ့ ပါတယ်။
မတရား စေခိုင်းတယ်၊ မမျှတတဲ့ စာချုပ် တွေကို၊ သူတို့ကို နားလည်အောင် ရှင်းမပြပဲ ချုပ်ဆို ခဲ့တယ်လို့ DSP Media အပေါ် စွပ်စွဲ ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အဆင် မပြေ ရင်တော့ နာမည်ကြီး Kara အဖွဲ့ ပြိုကွဲ သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
About Kara Band (wikipedia.org)
အဆိုတော် IU (၁၈ နှစ်) ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ထဲမှာ ရုတ်တရက် အကြီးအကျယ် နာမည် ကြီးလာ ပါတယ်။
အုပ်စုလိုက် နာမည် ကြီးနေ ကြတဲ့ အဆို လောကမှာ သူတစ်ဦးပဲ solo နာမည် ထွက်လာတာ ထူးခြားချက် ပါပဲ။
အဆိုလောက ကို လက်ဝါကြီး အုပ်ထားတဲ့ agency တွေမှ မွေးထုတ် တာလည်း မဟုတ်ပဲ၊ မထင် မရှား agency လေးတစ်ခု မှ မွေးထုတ် ပေးခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အနုပညာ သည်လေး တစ်ယောက် ပါပဲ။
Source : Teenage Singer IU Is Open to Surprises
Ryoo Si-won Signs Deal with Japan's Avex
ဂျပန်မှာအောင်မြင်းနေတဲ့ Ryoo Si-won
အဆိုတော် မင်းသား Ryoo Si-won ဟာ မကြာမှီ က နာမည်ကြီး ဂျပန် ဓါတ်ပြား ကုမ္ပဏီ Avex နဲ့ contract စာချုပ် အသစ် ချုပ်ဆို လိုက် ပါတယ်။
Avex ကုမ္ပဏီ ဟာ နာမည်ကြီး ဂျပန် အဆိုတော် များဖြစ် ကြတဲ့ Ayumi Hamasaki, Namie Amuro နဲ့ M-Floင တို့အပြင် ကိုးရီးယား အဆို အဖွဲ့ TVXQ တို့နဲ့ လက်တွဲ နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်အတွင်း Ryoo Si-won ဟာ ဂျပန်မှာ album ၁၉ ခု ထုတ်ဝေ ခဲ့ပြီး၊ အားလုံး ဂျပန် Oricon Charts ရဲ့ top 10 စာရင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ထို့ပြင် concert ပေါင်း ၈၀ ကျော် ကျင်းပ ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ပရိသတ် ၅ သိန်းကျော် ကြည့်ရှု ခဲ့ပါတယ်။
Source : Ryoo Si-won Signs Deal with Japan's Avex
Hyeon Bin - Song Hye kyo,
their worlds within? Going separate ways?
ချစ်သူများ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသား Hyeon Bin နဲ မင်းသမီး Song Hye-kyo (အွန်စော) တို့ လမ်းခွဲ ကြတော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ internet ထဲမှာ ပြောနေကြ ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ agency များက ဒီသတင်းကို ငြင်းပယ် ထားပါတယ်။ သို့သော် အင်မတန် မှ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စ တွေမှာ နုတ်လုံ တဲ့ မင်းသား Hyeon Bin ရဲ့ နုတ်ဆိတ် နေမှုက မီးလောင်ရာ လေပင့် ပေးသလို ဖြစ်နေ ပါတယ်။
Source : Hyeon Bin - Song Hye kyo, their worlds within? Going separate ways?
TVXQ's New Album Ranks 4th on Global Chart
TVXQ အဖွဲ့ဟာ နှစ်ဖွဲ့ ကွဲသွား ပါတယ်။ Jaejoong, Yoochun နဲ့ Junsu တို့က JYJ ဆိုပြီး ခွဲထွက် သွား ပါတယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ Changmin and Yunho ကို TVXQ (duo) လို့နာမည် သစ်ပေးပြီး ဆက်ဆိုစေ ခဲ့ပါတယ်။
Keep Your Head Down ဆိုတဲ့ album အသစ်ဟာ Hanteo နဲ့ Hot Track အပါတ်စဉ် chart တွေမှာ #1 ရခဲ့ ပါတယ်။
United World Chart မှာလည်း နံပတ် ၄ ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ ရှေ့မှာ Rihanna, the Black Eyed Peas နဲ့ Michael Jackson တို့ပဲ ရှိပါတယ်။
United World Chart ဟာ U.S. Billboard Chart, Japan's Oricon နဲ့ Britain's U.K. Chart တို့ကို စုပေါင်းပြီး ရေးဆွဲ ထားတဲ့ chart ဖြစ်ပါတယ်။
Source : TVXQ's New Album Ranks 4th on Global Chart
Lee Byeong-heon to Star in
Hollywood Blockbuster 'G.I.Joe 2'
Lee Byeong-heon ရဲ့ဟောလီဝုဒ် G.I.Joe အမှတ်၂
မင်းသား Lee Byeong-Heon ဟာ G.I.Joe အမှတ် ၂ ကို ၂၀၁၁ ဇွန်လ မှာ စတင် ရိုက်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၂ နွေရာသီ မှာ ရုံတင် ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
G.I.Joe အမှတ် ၁ သို့မဟုတ် "G.I.Joe : The Rise Of Cobra" ဟာ အမြတ်ငွေ US$ 302.13 million ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
Source : Lee Byeong-heon to Star in Hollywood Blockbuster 'G.I.Joe 2'
Big Bang ရဲ့ Album အသစ်
နာမည်ကျော် Big Bang အဖွဲ့ဟာ မကြာမှီမှာ album အသစ် ထုတ်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်တဲ့ YG Entertainment က ကြေငြာ ခဲ့ ပါတယ်။
Big Bang အဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့လိုက် အနေနဲ့ ပျောက် နေတာ ၂ နှစ်လောက် ရှိပါပြီး။ ဒီကြား ထဲမှာ အဖွဲ့ဝင် များဟာ တစ်ဦး ချင်းပဲ အနုပညာ လုပ်ငန်း များကို လုပ်နေ ကြပါတယ်။
ပြန်ဆုံပွဲ အနေနဲ့ လူ ၄၀, ၀၀၀ ဆန့်တဲ့ Olympic Park မှာရှိတဲ့ Gymnastics Stadium မှာ ဖေဖဝါရီ ၂၅ မှ ၂၇ အတွင်း show ပွဲ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Big Bang to return with new album
Han Hye-jin to return after 1 year
as lead in "A Thorn Bush Bird"
Han Hye-jin ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
ဇာတ်လမ်းတွဲ လောကမှ ၁ နှစ်လောက် ပျောက်နေတဲ့ (Jumong) မင်းသမီး Han Hye-jin ဟာ KBS 2TV ရုပ်သံမှ ဖေဖဝါရီ လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်မဲ့ Jejoongwon လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ ပြန်လည် ပေါ်ထွက် လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Han Hye-jin to return after 1 year as lead in "A Thorn Bush Bird"
Korea Becomes the
"Hollywood of the East"
ကမ္ဘာကျော် CNN သတင်း အဖွဲ့နဲ့ France2TV တို့မှ ကိုးရီးယား အနုပညာ လောကနဲ့ Korean Wave အကြောင်းကို အတော် ကျယ်ကျယ် ပျံပျံ ထုတ်လွှင့် ခဲ့ကြပြီး၊ CNN သတင်း အဖွဲ့က ကိုးရီးယား ကို "အရှေ့တိုင်းရဲ့ ဟောလီဝုးဒ်" (Hollywood of the East) လို့ပင် တင်စား ဖေါ်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
Source : Korea Becomes the "Hollywood of the East"
Kim Ah-joong Receives Master's
Degree from Korea University
Kim Ah-joong Master ဘွဲ့ရခြင်း
မင်းသမီး Kim Ah-joong ဟာ Korea University မှ မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (master degree in journalism and mass communications) ကို မကြာမှီ က အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ မင်းသား Park Shin-yang နဲ့တွဲဖက် ပြီး ပြသဆဲ Sign (SBS) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် လျက်ရှိ ပါတယ်။
Source : Kim Ah-joong Receives Master's Degree from Korea University
Kim Tae-hee, armpit humiliation?
Netizens "Her beauty shines!"
Kim Tae-hee ရဲ့မမြင်အပ်တဲ့အရာပေါ်သွားလို့တဲ့
Kim Tae-hee ရဲ့ လက်မြှောက် ထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံ ဟာ internet ထဲမှာ ပျံ့နေ ပါတယ်။ မင်းသမီး ရဲ့ ကောင်းစွာ ရိတ်မထား တဲ့ ဂျိုင်းမွှေး များကို ပုံထဲမှာ ရေးရေး မြင်နေရ တဲ့အတွက်၊ ပရိသတ် အကြားမှာ တော်တော် ပွစေ့ ပွစေ့ ဖြစ်နေ ကြပါတယ်။
ဂျွိုင်းမွှေ ရိတ်မထား လည်း လှနေတုံး ပါပဲလို့ မခံချင် တဲ့သူများ ကပြန်ပြော ကြပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee, armpit humiliation? Netizens "Her beauty shines!"
Hyeon Bin's Long party kiss
scene with Ha Ji-won? With
Song Hye-kyo too in "Worlds Within"
Hyeon Bin မင်းသမီး
မကြာမှီက ပြသ ပြီးသွားတဲ့ Secret Garden ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Hyeon-bin (Kim Joo-won) က မင်းသမီး Ha Ji-won (Gil La-im) ကို စက္ကန့် ၄၀ ကြာ နမ်းခဲ့ ပါတယ်။
World Within ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း မင်းသမီး Song Hye-kyo နဲ့ အတော် ကြာတဲ့ အနမ်းခန်း တွေကို ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။
Kiss scene တွေကို အထက်မှာ ယှဉ်တွဲ ဖေါ်ပြ ထားပါတယ်။ အဲ - တော်တော် ကံကောင်းတဲ့ မင်းသား ပါပဲ။
Source : Hyeon Bin's Long party kiss scene with Ha Ji-won? With Song Hye-kyo too in "Worlds Within"
Song Seung-heon surprise reveals top nude
ပြသဆဲ My Princess (MBC) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Song Seung-heon ဟာ သူ့ရဲ့ လုံးကျစ် နေတဲ့ အပေါ်ပိုင်း ဗလ များကို အပြည့် ထုတ်ပြ သွားပါတယ်။
မင်းသားကြီး ဝင်းဦး ရဲ့ "ကြွက်သား အဖုအဖု ထုထုပြီး ခရာချင် စရာကွယ် ထွားကြိုင်းတဲ့ မြန်မာ လူငယ်" ဆိုတဲ့ သီချင်း စာသားကို သွားပြီး သတိ ရမိ ပါတယ်။
Source : Song Seung-heon surprise reveals top nude
Joo Jin-mo and Lee Da-hae
cast in new historical film
Joo Jin-mo နဲ့ Lee Da-hae
မင်းသား Joo Jin-mo မင်းသမီး Lee Da-hae (ချိုဝမ်) တို့ဟာ ဒါရိုက်တာ Jang Yoon-hyeon ရဲ့ Coffee လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ရာဇဝင် ရုပ်ရှင်ကား မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင် မှာ မင်းသား Joo Jin-mo, မင်းသမီး Lee Da-hae, မင်းသား Park Hee-soon နဲ့ မင်းသမီး Yoo Seon တို့ ပါဝင် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Joo Jin-mo and Lee Da-hae cast in new historical film
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/503/hot-news-19-feb-2011
Hot News-10 Jan 2011
Posted By - Ko Ko - January 10, 2011
Song Hye-kyo Ranked 18th Among
100 Most Beautiful Face
အလှဆုံး ၁၀၀ ထဲမှာ ၁၈ ချိတ်တဲ့ Song Hye-kyo
နာမည်ကျော် www.tccandler.com က နှစ်စဉ် 100 Most Beautiful Famous Faces ကိုရွေ.ချယ် တင်ဆက် လာတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ရှိသွား ပါပြီး။
ဒီနှစ် ၂၁ ကြိမ်မြောက် ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ စာရင်း ထဲမှာ၊ ကိုးရီးယား မင်းသမီး Song Hye-kyo (အွန်စော) ဟာ ၁၀၀ မှာ အမှတ်စဉ် ၁၈ တက်ချိတ် ခဲ့ပါတယ်။
၄င်း website ကပဲ လာမဲ့ နှစ်မှာ Song Hye-kyo ဟာ အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၁၀ အတွင်းကို ရောက်သွား လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ချက်ပြု ထားပါတယ်။
Song Hye-kyo ဟာ ၂၁ နှစ် အတွင်းမှာ ပထမ ဆုံး ဒီစားရင်း မှာပါ လာတဲ့ ကိုးရီးယား မင်းသမီး လည်းဖြစ် ပါတယ်။
Source : 100 Most Beautiful Famous Faces 2010
Kim Hyun-joong won Hong Kong
'Top Buzz Korean Artist'
မင်းသား Kim Hyun-joong - Yahoo ဆုရခြင်း
Yahoo.com က သူ့ website မှာရှာ ကြတဲ့ မင်းသား မင်းသမီး တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ ရှာဖွေ ကြတဲ့ အရေ အတွက် တွေကို မှတ်ထားပြီး Yahoo! Asia Buzz Awards လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ဆုကို နှစ်စဉ် ဆုပေး ပါတယ်။
မင်းသား Kim Hyun-joong ဟာ အကြိမ် အများဆုံး ရှာဖွေ ခံရလို့ Yahoo Asia Buzz Award 2010 ကို ဆွတ်ခူး ရရှိ သွားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Kim Hyun-joong won Hong Kong 'Top Buzz Korean Artist'
Han Ji-min is changed?
ပုံပြောင်းသွားတဲ့ Han Ji-min
မင်းသမီး Han Ji-min ဟာသူ့ ရဲ့ သရုပ်ဆောင် သက်တမ်း တစ်လျှောက် နုနုရွရွ ချစ်စဖွယ် ပုံစံ လေးတွေ နဲ့ပဲ သရုပ်ဆောင် လာခဲ့ ပါတယ်။ မကြာမှီ ပြသမဲ့ Gaek-joo နဲ့ Detective K ရုပ်ရှင် များမှာ တော်တော် sexy ဖြစ်တဲ့ ပုံစံ များနဲ့ သရုပ်ဆောင် ထားတာ ကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။
Source : Han Ji-min is changed?
TVCF ကြော်ငြာ website ရဲ့စစ်တမ်း အရ မင်းသား Lee Seung-gi ဟာ ဒီနှစ် ထဲမှာ ကြေငြာ အရိုက်ရဆုံး မင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Seung-gi က ကြော်ငြာ ၃၀၊ အိုလံပစ် စကိတ် ချန်ပီယံ Kim Yu-na က ကြော်ငြာ ၂၈၊ Girls' Generation အဆို အဖွဲ့က ကြောငြာ ၂၅၊ မင်းသား Rain က ကြော်ငြာ ၂၁၊ မင်းသမီး Lee Na-young နဲ့ Sin Min-ah တို့က ကြော်ငြာ ၂၀ စီ နဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်မှာ ကြော်ငြာ ခဲ့ကြ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Seung-gi appeared in most TV ads this year
ပထမရတဲ့ Hero Jaejoong
ထိုင်ဝမ် မဂ္ဂဇင်း မှ Korea, Taiwan, Hong Kong တို့မှာ စစ်တမ်း ကောက်ချက် အရ Hero Jaejoong ဟာ ဒီဒေသ မှာ လူကြိုက် အများဆုံး ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
Hero Jaejoong ဟာ TVXQ အဖွဲ့နဲ့ ရှေးဦးစွာ သီချင်း စဆို ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အသစ် ဖွဲ့တဲ့ JYJ အဖွဲ့မှာ ပြောင်း ဆိုပြန် ပါတယ်။
သူပါတဲ့ JYJ အဖွဲ့ဟာ ဒီနှစ် USA Billboard 100 မှာ အမှတ် ၅ ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ထွက်မဲ့ The Beginnings အမည်ရှိ album ဟာ အခွေ မထွက်မှီ ကြိုမှာတဲ့ pre-order ခွေ 520,000 အော်းဒါ ရရှိ ထားပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Jaejoong, The Most Popular Idol Star Abroad
နိုင်ငံ တိုးတက် လာသည် နဲ့အမျှ ဝင်ငွေ တိုးတက် လာတော့ အဟာရ ရှိတဲ့ အစားအစာ တွေစားနိုင် လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကိုယ်ခန္ဒာ တောင့်တင်း ပြီးအရပ် ရှည်လာ ကြပါတယ်။
ကိုးရီးယား မျိုးဆက်သစ် ဟာ ဖျမ်းမျှ6cm မှ 8 cm အရပ် ပိုရှည်လာ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခု ကိုးရီးယား တွေရဲ့ အရပ်ဟာ ဖျမ်းမျှ ယောက်ျား 174 cm နဲ့ မိန်းမ 160.5 cm ရှိနေပြီး လို့ ဆို ပါတယ်။
Source : Koreans Growing Taller, Thinner, Study Shows
Yahoo, Japan ရဲ့ အဆိုအရ Yahoo search မှာ အရှာခံ ရတဲ့ အထဲမှာ TVXQ အဖွဲ့ဟာ တတိယ လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှေ့မှာ ဂျပန် သီချင်း အဖွဲ့များ ဖြစ်တဲ့ AKB48 နဲ့ Arashi ရှိပါတယ်။
Source : TVXQ becomes the third most-searched artist in Japan
Kara "Jumping" claims No.1 in downloads
Download အများဆုံး Kara Album
Jumping လို့အမည် ပေးထားတဲ့ Kara ရဲ့သီချင်း album "smartphone application" ကို ဂျပန်မှာ download အများဆုံး လုပ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ အဆိုတော် လေးများရဲ့ agency ကပြောသွား ပါတယ်။
Source : Kara "Jumping" claims No.1 in downloads for smartphone applications
Wednesdays နဲ့ Thursdays မှာပြသ တဲ့ SBS ရုပ်သံမှ Daemul - Big Thing ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ ၁၀ ပတ်မြောက် rating ၂၆.၁% နဲ့ ပထမ နေရာမှာ ရပ်တည် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : SBS "Daemul - Big Thing" leads TV chart for 10th week
နာမည်ကြီး မင်းသား Kim Seong-min ကို မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှု နဲ့အမှု ဖွင့်ထားပြီး လာမဲ့ အပတ်မှာ အချုပ်ချ တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
အမှုကွင်းဆက် လိုက်ပြီး လူရွှင်တော် Jeon Chang-geol နဲ့ အဆိုတော် Crown J တို့ကိုပါ အရေးယူ ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် အနု ပညာသည် ခုနှစ်ယောက် ခန့်ထပ်မံ အရေးယူ ရန်ရှိ နေတယ်လို့ လည်းသတင်းတွေ ထွက်နေ ပါတယ်။
Source : 10 more entertainers involved in drug use
T-ara အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Jeon Bo-ram နဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ Jeon Young-rok တို့ဟာ Crazy for You အမည်ရှိ musical အစီအစဉ် မှာ အတူ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သီရ ပါတယ်။
Jeon Bo-ram ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ Jeon Young-rok ဟာ 1970-1980 က နာမည်ကျော် အဆိုတော် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
အဖိုး Hwang Hae နဲ့ အဖွား Baek Seol-hee ဟာလည်း တချိန်က မင်းသားနဲ့ အဆိုတော် များ အသီးသီး ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ တကယ့် အနုပညာ မျိုးရိုး ပါပဲ။
Source : 70s Musical Brings Father and Daughter Together
Girls' Generation tops YouTube's
most watched video list in Korea
Youtube တွင်အကြည့်ဆုံး Girls' Generation
Girls' Generation ဟာ ကိုးရီးယား မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတွက် youtube ကနေ အကြည့် ကြဆုံး အဆိုအဖွဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Girls' Generation tops YouTube's most watched video list in Korea
Bae Yong-joon ၄င်းရဲ့ Fans များနှင့်
မင်းသား Bae Yong-joon ဟာ "Family Photo Project-We'reafamily" အမည်ရှိတဲ့ project အစီအစဉ် ကိုစတင် ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ fans များနဲ့ အတူရော ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တဲ့ အစီအစဉ် ပါ။
ဂျပန်မှာ December 15 က fans ၅၀၀၀ နဲ့စရိုက်ပြီး အာရှတခွင် က နိုင်ငံတွေမှာ လှည်ရိုက်မယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Bae Yong-joon takes photo with 5,000 fans in Japan
မကြာခင် ကအထိ သိတ် မအောင်မြင် သေးတဲ့ အဆိုတော် IU (age 17) ဟာ တစ်ဟုန်ထိုး အောင်မြင်လာ ပါတယ်။ IU ရဲ့ Good Day အမည်ရှိတဲ့ သီချင်းဟာ Gaon's weekly singles chart ရဲ့ထိပ်ဆုံးကို ဒီဇင်ဘာ ၅ မှ ၁၁ ရက် အတွင်း ရောက်ရှိ လာပါတယ်။
http://www.youtube.com/watch?v=xNOoxoENsfs IU ရဲ့သီချင်လေးများ
IU ဟာ ကိုးရီးယား သီချင်း လောကကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး agency ကြီး ၃ခု ကနေ မွေးထုတ် လိုက်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ဦး မဟုတ်ပါ။ သီးခြား ရပ်တည်ပြီး ၃ နှစ်လောက် ကြိုးစား ပြီးမှ အောင်မြင် တဲ့သူ ဖြစ်လို့ ရှားတယ်လို့ ဆိုရ ပါမယ်။
သူ့အကြောင်း အချက်အလက် စုဆောင်းလို့ ပြည့်စုံရင် သီးခြား ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ရေးပြီး တင်ပြ ပါမယ်။
Source : IU's new song tops weekly Gaon chart
Giant: A Korean Drama Soap Opera
About A Korean Family & Revenge
နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတွဲ Giant ကို ၇ လကျော် ပြသပြီးနောက် ဇာတ်သိမ်းခန်း မကြာမှီ က ပြသ သွားပါတယ်။
ဇာတ်သိမ်းခန်း ဟာ rating 40.1% ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ Seoul မြို့ ကို ၁၉၇၀ မှ ၂၀၁၀ အတွင်း နောက်ခံ ထားတဲ့၊ မိသားစု ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြီးဖြစ် ပါတယ်။
Lee Beom-soo, Park Jin-hee, Park Sang-min, Jeong Bo-Suk တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ပြီး ဒါရိုက်တာ က Yoo In Shik နဲ့ ဇာတ်ညွှန်း က Jang Young Chul ဖြစ်ပြီး၊ US$9million ကုန်ကျ ပါတယ်။
Source : Giant: A Korean Drama Soap Opera About A Korean Family & Revenge
Eric Moon ဂျပန်တွင် Fan Meet ပြုလုပ်မည်
မင်းသား Eric Moon (31) ဟာ စစ်မှု ထမ်းသက် ၂နှစ် ပြီးဆုံးလို့် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ မှာ စစ်တပ် ထဲက ထွက်ပါတယ်။
တပ်ဂိတ် ကနေပြီး Korea, Taiwan, Japan, Thailand နဲ့ Canada က fans ၄၀၀ ခန့်စောင့်ကြို ကြပါတယ်။
မင်းသားဟာ ဂျပန် နိုင်ငံ Tokyo နဲ့ Osaka တွင် December 18 နဲ့ 19 မှာ fan meet ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ မကြာမှီ Poseidon လို့အမည် ပေးထားတဲ့ တီဗွီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ ပါတယ်။
Source : Singer Eric to hold fan meeting in Japan this weekend
New SBS drama "Athena" leads
prime time chart on 1st week
အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ ATHENA ဇာတ်လမ်းတွဲ
SBS ရုပ်သံရဲ့ ATHENA ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ ပွဲဦးထွက် အပတ်မှာ rating 26.5% နဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပြေးခဲ့ ပါတယ်။
Jeong Woo-seong, Soo-ae, Cha Seung-won, Lee Ji-ah, Kim Min-jong, Yoo Dong-geun နဲ့ Choi Si-won တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ပြီး၊ နာမည်ကျော် IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့အဆက် ဖြစ်ပါတယ်။
Source : New SBS drama "Athena" leads prime time chart on 1st week
Han Ji-hye ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသမီး Han Ji-hye (27) ဟာ ၂၀၁၁ ခု နှစ် ဦးပိုင်းမှာ The Duo လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ရာဇဝင် တီဗွီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ရိုက်ရန် ရှိပါတယ်။ September 2009 တွင် လက်ထပ်ခဲ့ ပြီးနောက်မှာ ပထမဆုံး ရိုက်မဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရှည်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြားထဲ မှာ KBS ရဲ့ Pianist လို့အမည် ရှိတဲ့၊ episode တစ်ခုထဲ ပါတဲ့ special drama တစ်ခုကို F4 မင်းသား Lee Min-ho နဲ့ တွဲပြီး ရိုက်ခဲ့ပါ သေးတယ်။
Source : Actress Han Ji-hye to star in new historical drama
'Mary' Moon Geun-yeong is old now, now just younger
မြန်မာတွေ အွန်စောငယ် လို့သိထား ကြတဲ့ Moon Geun-yeong (23) ဟာ KBS 2TV ရဲ့ ပြသဆဲ Marry Me, Mary အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
Moon Geun-yeong ဟာ အသက် ၂၃နှစ် ရှိပြီး ဖြစ်ပေမဲ့ Marry Me, Mary ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲမှာ ပိုပြီး ငယ်တယ်လို့ ထင်ရတယ် လို့ ဆိုကြ ပါတယ်။
Source : 'Mary' Moon Geun-yeong is old now, now just younger
Wonder Girls' 'Nobody' Among
Best-Selling Singles of the Year in U.S.
Wonder Girls သီချင်း US Billboard 100 တွင် ၃၁ ချိတ်ခြင်း
Wonder Girls အဆိုအဖွဲ့ ရဲ့သီချင်း Nobody ဟာ USA Billboard 100 ရဲ့ Year End Hot Single Sales ဇယားမှာ အမှတ်စဉ် ၃၁ ချိတ်ပါတယ်။
မနှစ်က အောက်တိုဘာ လမှာ Billboard 100 ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၇၆ ရရှိ ခဲ့ပြီး အခု ၁နှစ် ကျော် ကြာတဲ့ အထိ ရောင်းကောင်း နေတုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ .
Source : Wonder Girls' 'Nobody' Among Best-Selling Singles of the Year in U.S.
'So Ji-sub Train' to Operate
Between Seoul and Chuncheon
ကိုးရီးယားရထားများတွင် So Ji-sub ပုံများချိတ်ဆွဲခြင်း
Seoul ဘူတာနဲ့ Chuncheon ဘူတာ နှစ်ခု အကြား စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့တွေမှာ Hallyu Romance Train အမည်ရှိ ရထား များကို တနေ့ နှစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲ ပေးနေ ပါတယ်။
၄င်းရထား တွေမှာ မင်းသား So Ji-sub ရဲ့ဓါတ်ပုံ တွေချိတ် ဆွဲပြီး အရောင်း မြှင့်တင် လျက် ရှိတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : 'So Ji-sub Train' to Operate Between Seoul and Chuncheon
Los Angeles Critics Association မှ
မင်းသမီးကြီး Kim Hye-ja အားဆု ချီးမြှင့်ခြင်း
USA Los Angeles မြို့ Critics Association မှ ကိုးရီးယား မင်းသမီး ကြီး Kim Hye-ja အား အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ ပါတယ်။
၄င်း ပါဝင်တဲ့ Mother - 2009 အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် အမေ အခန်းက ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တာ ကောင်းလို့ ဆုချီးမြင့် တာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Kim Hye-ja named best actress by LA critics
Motion picture first came to
Korea at turn of 20th century
October 1897 မှာ အမေရိကန် လူမျိုး Burton Holmes ဆိုသူ ခရီးသွား ဧည့်သည် တစ်ဦးဟာ ကိုးရီးယား နိုင်ငံသို့ ရုပ်ရှင် ပြစက် နဲ့ ရုပ်ရှင် ကင်မရာ များ ယူဆောင် လာခဲ့ ပါတယ်။
Burton Holmes ဟာ သူယူဆောင် လာတဲ့ ပြစက် နဲ့ တော်ဝင် မိသားစု ကို နန်းတွင်မှာ ပထမ ဆုံး ရုပ်ရှင်ကို ပြသပေး ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနှစ် မှာပဲ Seoul မြို့တော် Chungmuro ရပ်ကွက် ရှိ ကုန်လှောင်ရုံ အစုတ် တစ်ခုကို ရုပ်ရှင် ပြလို့ရအောင် ဖန်တည်း ပြီး၊ ရုံဝင်ခ နဲ့ပြ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Motion picture first came to Korea at turn of 20th century
Ji Jin-hee ဟောင်ကောင်သွားခြင်း
မင်းသား Ji Jin-hee ဟာ December 11 မှ 13 အတွင်း ဟောင်ကောင် သို့ သွားရောက်ပြီး ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ Dong Yi ကို promotion သွားလုပ် ပါတယ်။
ရောက်တုံး ရောက်ခိုက် မှာ fan meet နဲ့ အင်တာဗျူး တွေလည်း ပြုလုပ် ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ လ ကလည်း Dong Yi ကို promotion လုပ်ရန် Taiwan သို့ အလားတူ သွားခဲ့ ပါသေးတယ်။
Source : Ji Jin-hee to visit Hong Kong to promote "Dong Yi"
Rain ဘာဆက်လုပ်မလဲ ?
Rain ဟာ The Fugitive Plan B လို့အမည် ရှိတဲ့ KBS ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို အဆုံးသတ် ပြီးနောက်ဘာ ဆက်လုပ်မယ် ဆိုတာကို TV အစီအစဉ် တစ်ခုမျာ ပြောသွား ပါတယ်။
The Fugitive Plan B ရိုက်နေစဉ် မှာလည်း Las Vagas မှာ လောင်းကစား ပြုလုပ် ခဲ့လို့ ကြွေး တွေ အများကြီး တင်နေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် ကိုလည်း ဖြေရှင်းခဲ့ ရပါ သေးတယ်။
ကျွန်တော် Hollywood နဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ကား လောက်ထပ်ရိုက် ပြီးရင် နောက်နှစ် ကုန်လောက်မှာ စစ်မှုထမ်း တာဝန် စတင် ပါတော့မယ် လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Rain Wraps Up "The Fugitive Plan B"...What's Next?
Book on Korean Wave adopted
as textbook for universities abroad
Goldsmiths, University of London in England နဲ့ the University of Melbourne in Australia တို့က "Korean Masculinities" လို့ အမည်ရှိတဲ့ ကိုးရီးယား နိုင်ငံထုတ် စာအုပ်တစ်အုပ် ကို သင်ရိုး စာအုပ် အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်ပါတယ်။
Source : Book on Korean Wave adopted as textbook for universities abroad
13 years of Romance - Kim Sung-soo
will be mairred to his girlfriend
မင်းသား Kim Sung-soo (37) ဟာ ၁၃ နှစ် သက်တမ်း ရှိခဲ့ပြီး သူ့ထက် ၄ နှစ်ငယ်တဲ့ ရည်းစား Ms. A နဲ့ ဒီနှစ် ထဲမှာ လက်ထပ်တော့ မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : 13 years of Romance - Kim Sung-soo will be mairred to his girlfriend
Lee Seung-gi fell down while
'2010 Golden Disk' was in progress
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က Seoul Korea University မှာ ၂၅ ကြိမ်မြောက် '2010 Golden Disk' ပွဲကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ မင်းသား Lee Seung-gi ကို Tak Jae-joon မှ အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ မင်းသားရဲ့ ကုလားထိုင် ဟာ ခွေကျ သွားပြီး မင်းသားဟာ ကြမ်းပြင် ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျ သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနောက်တော့ ဖုတ်ဖက် ခါထပြီး၊ မင်းသားလည်း ရှက်ရှက် နဲ့ ဟန်မပျက် ဆက်ပြီး ဗျူ ခဲ့ရ ပါတယ်။
အခု ဆိုရင် Lee Seung-gi ဟာ Ouch Seung-gi ဆိုတဲ့ နာမည် ပြောင်ရနေ ပြီးလို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Seung-gi fell down while '2010 Golden Disk' was in progress
Jeon Do-yeon's father passed away from lung cancer
Jeon Do-yeon ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်း
မင်းသမီး Jeon Do-yeon ရဲ့ ဖခင် ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် နေ့က အဆုတ် ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ Ilsan National Cancer Centre ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန် အနိစ္စ ရောက်သွား တယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။
Source : Jeon Do-yeon's father passed away from lung cancer
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/502/hot-news-10-jan-2011
Hot News-27 Nov 2010
Posted By - Ko Ko - November 27, 2010
Jumong ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြင့်နာမည် ကြီးလာ ခဲ့သော မင်းသမီး Han Hye-jin ဟာ TV ဇာတ်လမ် တွဲများနှင့် ၄နှစ်မျှ အဆက်ပြတ် နေခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသမီးသည် MBC မှပြသမဲ့ Mate အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ် တွင်မကြာမီ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ် လို့သိရ ပါသည်။
Ha Ji-won ဟာ TV ဇာတ်လမ် တွဲများနှင့် ၄နှစ်မျှ အဆက်ပြတ် နေခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသမီးသည် SBS မှပြသမည့် Secret Garden အမည်ရှိသော TV ဇာတ်လမ် တွင်မကြာမီ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ် လို့သိရ ပါသည်။
ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး သမတ တစ်ဦး အကြောင်း စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း နောက်ခံ နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Daemul - Big Thing အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး ၂ရက် ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေထဲမှာ rating 24.35 % နဲ့ထိပ်ဆုံး က ပြေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Lee Min-ho ဟာ SBS TV ထုတ်လွှင့်မဲ့ City Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Kang-jin အမည်ရှိတဲ့ CIA agent ဟောင်း၊ လူကြမ်းကြီး အသွင်နဲ့ ပါဝင် မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Jang Geun-seok said that he actually drank with Moon Geun-yeong during the shooting
ဆိုးသွား တာက၊ ဆွေးနွေးပွဲ စင်မြင့်ရဲ့ နောက်ခံ (background) မှာ Girls' Generation အဆိုအဖွဲ့ ရဲ့ poster ကြီးကပ်ထားပြီး၊ လိမ်ဝန်ဆောင်မှု (Sexual Service) ဆိုတဲ့ စာတန်းကြီး ရေးထား ခြင်းပါပဲ။
Naughty Kiss ကားတို များကို www.youtube.com/ytkiss မှာကြည့်နိုင် ပါတယ်။
Sleeping with the Enemy အမည်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်နေစဉ်၊ ရိုက်ကွင်းသုံး ဖေါက်ခွဲ ပစ္စည်းများ ပေါက်ကွဲပြီး တစ်ဦး ဒါဏ်ရာ ရလို့ ဆေးရုံ တင်ထားရ ပါတယ်။ ရဲကလည်း စုံစမ်း မှုများ ပြုလုပ် နေပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်မှာ Kim Joo-hyeok, Jeong Ryeo-won, Yoo Hae-jin, Byeon Hee-bong နဲ့ Yang Jeong-ah တို့ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြပြီး ဒါရိုက်တာ Park Geon-yong မှဦးစီး ရိုက်ကူး နေပါတယ်။
ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Kim So-yeon ဟာ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း မြောက် ကိုးရီးယား agent အဖြစ် ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့လို့ ဆုရရှိ ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ချောမော လှပသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ သရုပ်ဆောင်မှု အတွက် ပိုနာမည် ကြီးပါတယ်။
September 8 ကစတင် ဖြန့်ချီ ခဲ့ရာ October 31 မှာ ကော်ပီ ၁၀၁,၂၅၂ ရောင်ချ ခဲ့ရပြီး၊ Oricon Chart မှာ အဆင့် ၂၅ ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်က Golden Rooster award for Best Director ဆုရ ထားတဲ့ တရုတ် အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ Liwen Ma မှဦးစီး ရိုက်ကူး မှာဖြစ် ပါတယ်။
2PM အဖွဲ့ U.S. Billboard အဆင့် ၁၃ နေရာချိတ်ခြင်း
2PM အဖွဲ့ရဲ့ Still 02:00PM အမည်ရှိတဲ့ album ဟာ U.S. Billboard Chart မှာ အဆင့် ၁၃ ချိတ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီသတင်းကြောင့် 2PM အဖွဲ့ အနေနဲ့ အလွန်မှ အံ့သြ ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြ ပါတယ်။
ပြသဆဲ မင်းသား Rain ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ The Fugitive Plan B ထဲမှာ professor Hwang Mi Jin အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီး Yoon Son-ha ဟာ ယာဉ်တိုက်မှု ကြောင့်ဆေးရုံ တင်ထားရ ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဇာတ်ညွှန်း တွေပြင်ပြီး တနေ ရာရာ ခရီးထွက် နေတဲ့ ပုံမျိုး ပြင်ဆင် ရိုက်ကူးနေ ပါတယ်။ နေကောင်းရင် အလွယ် တကူ ပြန်ဝင်ပြီး ရိုက်နိုင်အောင်လည်း ဖန်တည် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Passerby #3 ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင်ဟာ ၂၃ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ Tokyo International Film Festival မှ ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသား Eric Moon (31) ဟာ ဥပဒေ အရ စစ်မှုထမ်း ၂ နှစ်ပြည့်မြောက် တဲ့အတွက်၊ October 30 ရက်နေ့က တပ်ကနေ ထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမှီ မှာ Poseidon လို့အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ရန် ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ သို့ ကိုးရီးယား အနုပညာ ထိုးဖေါက် ရာမှာ ရှေးဦးစွာ "နန်းတွင်းရတနာ" (Dae Jang Geum) ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုတင်ပို့ ပြသ စေပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Rain တို့ဘက်က မခံမရပ် နိုင်ဖြစ်ပြီး နာမည် ဖျက်မှုနဲ့ ပြန်လည် တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင် နေပါတယ်။
Kim Tae-hee ဂျပန်ဈေးကွက်ဖက်ခြေဦးလှည့်ပြီး
ဂျပန် Nikkan Sports သတင်းစာ နဲ့ အင်တာဗျူး ရာမှာ၊ ဂျပန်တွင် လုပ်ငန်းများ တိုးလုပ်ဖိုို့ ဂျပန် agency တစ်ခုနဲ့ စာချုပ်ချုပ် ထားကြောင်း၊ Hollywood ဘက်ကိုလည်း မျှော်လင့်ချက် ထားကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို သွားပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ Kim Tae-hee မကြာမှီက ပြသွားတဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြောင့် ဂျပန်မှာ တော်တော် နာမည် ကြီးနေ ပါတယ်။
မင်းသား Bae Yong-joon ဟာ ဂျပန် စာပေ ထုတ်ဝေရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို တရားစွဲး ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဂျပန် ကုပ္မဏီ မှထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ မင်းသားရဲ့ ဓါတ်ပုံ များကို ခွင့်ပြုချက် မယူပဲ သုံးစွဲ ခဲ့တာကြောင့် တရား စွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/501/hot-news-27-nov-2010
Are Kim Tae-hee and Lee Byeong-heon dating?
Kim Tae-hee and Lee Byeong-heon in IRIS
မင်းသမီး Kim Tae-hee နဲ့ မင်းသား
Lee Byeong-Heon တို့တွဲ နေကြ သလား?
မင်းသမီး Kim Tae-hee နဲ့ မင်းသား Lee Byeong-Heon တို့တွဲ နေကြတယ် လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေ ပါတယ်။
ဒီကိစ္စ ကို မကြာမှီက KBS ရုပ်သံက ပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူး မှာ မေးခွန်း ထုတ်တဲ့ အခါမှာ မင်းသမီးက၊ "ဒီသတင်းကို ကြားရတော့ ကျွှန်မ အတော် ဝမ်းသာ သွားမိ ပါတယ် လို့ ဖြေပါတယ်"။
နောက်တခါ ထပ်ပြီး တကယ် တွဲနေ ကြလား လို့ မေးတော့၊ မဟုတ် ပါဘူး လို့ ငြင်းဆို သွား ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee was happy about dating rumors with Lee Byeong-heon
Gong Yoo to Hold Live Concert
Gong Yoo ဂျပန်တွင်ပြဇာတ်ကမည်
Coffee Prince ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Gong Yoo ဟာ December5မှာ ဂျပန်တွင် fan meet ပြုလုပ်ရန် ရှိပါတယ်။
အဲဒီ ပွဲမှာ Love Song for You အမည်ရှိတဲ့ ပြဇာတ်နဲ့ သူ့ရဲ့ fans များကို ဖြေဖျော်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Gong Yoo to Hold Live Concert In Japan in December
'The Man From Nowhere' going
to reach 6,000,000 viewers
Won Bin ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအားပေးသူ ၆ သန်းကျော်သွားပြီး
The Man From Nowhere လို့အမည် ရှိတဲ့ မင်းသား Won Bin ရဲ့ရုပ်ရှင် ဟာ အားပေး ကြည့်ရှုသူ ၆ သန်းကျော် သွားပြီး လို့သိရ ပါတယ်၊ ၆သန်း ဆိုတာ ရန်ကုန် မြို့ရဲ့ လူဦးရေ နဲ့ညီ ပါတယ်။
Source : Won Bin's 'The Man From Nowhere' going to reach 6,000,000 viewers
Rain says done lifetime's worth
of running for "The Fugitive Plan B"
Rain ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲသစ် The Fugitive Plan B
မင်းသား Rain ရဲ့ The Fugitive Plan B (KBS) လို့အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်ကို မင်းသမီး Lee Na-young နဲ့တွဲဖက် ပြီး September 29 မှာ စတင် ပြသ ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ကတော့ မကြာမှီ က ပြသွားတဲ့ နာမည်ကျော် Slave Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲ (ကျွန်မုဆိုး) ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ Kwak Jeong-hwan ပဲဖြစ် ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ အခြားပါဝင် သူများ ကတော့ Daniel Henney, Lee Jeong-jin, Kong Hyeong-jin, Yoon Son-ha, ဟောင်ကောင်မှ Ti Lung, တရုတ်ပြည်မှ Josie Ho, ဂျပန်မှ Naoto Takenaka နဲ့ Uehara Takako တို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
Source : Rain says done lifetime's worth of running for "The Fugitive Plan B"
Song Hye-kyo's return in films
Song Hye-kyo ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်တော့မည်
မင်းသမီး Song Hye-kyo ဟာ မကြာမှီမှာ ဒါရိုက်တာ Lee Jeong-hyang ရဲ့ Nobody Somebody လို့ ယာယီ အမည် ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ကား ရိုက်ရန် ရှိ ပါတယ်။
မင်းသမီးဟာ လောလောဆယ် တရုတ်ပြည် မှာရုပ်ရှင် တစ်ကား ရိုက်နေ ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ လကုန်မှာ ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အထက် ဖေါ်ပြပါ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် ကို ဆက်ရိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး နောက်ဆုံး ရိုက် ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် ကတော့ Hwangjin-yi (2007) ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Song Hye-kyo's return in films
A secret date between
Jeon Ji-hyeon and John Woo
Jeon Ji-hyeon နဲ့ ဒါရိုက်တာ John Woo
လျှို့ဝှက် date လုပ်ကြသလား?
လူတွေက မေးခွန်း ထုတ်နေကြ ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင် ဒါရိုက်တာ John Woo ဟာ ကိုးရီးယား ကို မကြာမှီက ခေတ္တ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစဉ်က ကိုးရီးယား မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon နဲ့ တိတ်တိတ် ချိန်းတွေ့ ကြတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေ လို့ပါ။
လုပ်ငန်း ဆွေနွေး ဖို့တွေ့ ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon ဟာ တရုပ်ကား တွေဖက် ခြေဦး လှည့်ဖို့ ခြေလှမ်း ပြင်နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : A secret date between Jeon Ji-hyeon and John Woo
"Bread, Love and Dreams" places
at No. 1 on weekly TV charts for 12th
Bread, Love and Dreams ဇာတ်လမ်းတွဲ
ပြသဆဲ Bread, Love and Dreams ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ #1 နေရာတွင် ၁၃ ပတ်မြောက် ရပ်တည် နေခဲ့ပြီး လူကြိုက် များနေကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Source : "Bread, Love and Dreams" places at No. 1 on weekly TV charts for 12th
မကြာမှီက ဂျပန်မှာ Girls' Generation အဖွဲ့ ဖြေဖျော် ခဲ့စဉ်က အားပေးသူ ပရိသတ် ၈၀% ကျော်ဟာ မိန်းခလေး တွေဖြစ် နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
အခြား ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး အဆို အဖွဲ့ များဖြစ် ကြတဲ့4Minute, Kara နဲ့ Brown Eyed Girls တို့ ဖြေဖျော် ခဲ့စဉ်က လည်း အားပေးသူ ပရိသတ် အများစု မိန်းခလေး များဖြစ် နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ပရိသတ် အများစု ဟာ ယောက်ျား လေးများ ဖြစ်သင့် ပေမဲ့ အခုလို အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်နေလို့ ဝေဖန် သူများ မျက်စေ့လည်နေကြ ပါတယ်။
Source : Why Japanese Girls Go Mad for Korean Girl Bands
MC Mong had healthy teeth extracted
TV-show host နဲ့ အဆိုတော် MC Mong (31) ကို ရဲက စစ်ထဲ မဝင်ရအောင် ရှောင်တဲ့ စွဲချက်နဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ရဲအဖွဲ့ ရဲ့ အဆို အရ သူဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပြပြီး ရက်ပေါင်း ၄၂၂ ရက် စစ်ထဲ မဝင် ရအောင် ရှောင်တိမ်း နေခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ကောင်းနေတဲ့ သွား ၃ ချောင်း ကိုတမင် နှုတ်ပစ်ပြီး တပ်ဝင် ဆေးစစ်ချက် ကျအောင် လုပ်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲ ထားပါတယ်။
ကိုးရီးယား မှာ ယောက်ျားလေး များဟာ အရွယ်ရောက် လာရင် ၂ နှစ် မဝင် မနေရ စစ်မှုထမ်း ကြရ ပါတယ်။
Source : MC Mong had healthy teeth extracted
So Ji-sub ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုရရှိခြင်း
September 25 မှ 30 အတွင်း ပြုလုပ် ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ 47th Daejong Film Award (2010) မှာ မင်းသား So Ji-sub ဟာ ထူးခြားတဲ့ ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသားဟာ ကိုးရီးယား ယဉ်ကျေးမှု (culture) ကို အာရှတလွှား မှာ သိရှိ လာစေရန် ဆောင်ရွက် ပန့်ပိုး ပေခဲ့လို့ ဒီဆုကို လက္ခံ ရရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : So Ji-sub to receive honor at Daejong Film Awards
Please love 'Doctor Champ' says Kim So-yeon
Kim So-yeon ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ
မင်းသမီး Kim So-yeon ရဲ့ Doctor Champ (SBS) လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်ကို September 27 ကစတင် ပြသ ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် သူများ ကတော့ Kim So-yeon, Jeong Kyeo-woon နဲ့ Eom Tae-woong တို့ဖြစ် ကြပြီး၊ ဒီ သုံးဦးရဲ့ ၃ ပွင့်ဆိုင် အချစ် ဇာတ်လမ်း နဲ့ ပုံဖေါ်ထား ပါတယ်။
Source : Please love 'Doctor Champ' says Kim So-yeon
Bae Yong-joon photo essay
to sell in China starting today
Bae Yong-joon ရဲ့စါအုပ် Chinese version ထုတ်ဝေခြင်း
မင်းသား Bae Yong-joon ရဲ့ Discovering the Beauty of Korea အမည်ရှိ စါအုပ် Chinese version ကို September 16 က တရုတ်ပြည် မှာ စတင် ဖြန့်ချီ ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်ရေ ၁၀၀, ၀၀၀ ရောင်းရမယ် လို့ ခန့်မှန်း ထားကြ ပါတယ်။
တစ်သိန်း ဆိုရင် တရုတ် ပြည်မှာ bestseller လို့သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ ကိုရီးယား နဲ့ ဂျပန် version ကို မနှစ်က စက်တင်ဘာ လမှာ ထုတ်ဝေ ခဲ့ရာမှာ သိန်းချီပြီး ရောင်းခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်က version copyright ကို မကြုံစဖူး won 800 million နဲ့ဝယ်သွား ခဲ့ပါတယ်။ တစ်အုပ်ကို US$ 28.87 နဲ့ ရောင်း ပါတယ်။
Source : Bae Yong-joon photo essay to sell in China starting today
Discovering the Beauty of Korea - Bae Yong-joon - Publisher - Sid Paper-US$28.87
Zhang Ziyi မင်းသား Joo Jin-mo ကိုကြိုက်ခဲ့သလား?
နာမည်ကျော် တရုတ် မင်းသမီး Zhang Ziyi ဟာလွန် ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ယခုလောက် နာမည် မကြီး သေးပါ။ Zhang Ziyi နဲ့ Joo Jin-mo တို့တွဲပြီး Musa အမည် ရှိတဲ့ ကိုးရီးယား ရာဇဝင် ရုပ်ရှင်ကား ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ရိုက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ရိုက်ကွင်း အတွင်းမှာရော ရိုက်ကွင်း အပ မှာပါ တတွဲတွဲ စါးအတူ သွားအတူ ရင်းနှီး ခဲ့ကြ ပါတယ်။
MBC talk show မှာ မင်းသားက "Zhang Ziyi ကျွန်တော့ ကိုများ သဘောကျ ခဲ့ လေမလား မသိပါ၊ သူ့ကိုတော့ ချစ်စရာ ကောင်းတယ် လို့ထင်ခဲ့ ပါတယ်။"
ဒါပေမဲ့ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်က girl friend ရှိနေ လေတော့ ဘယ်လိုမှ ရှေ့မဆက် ဖြစ်ခဲ့ပါ၊ အဲတုံးက သာ နာမည်ကျော် မင်းသမီး ဖြစ်လါမယ် ဆိုတာ သိခဲ့ ရရင် အကောင်းသား လို့ ညီးသွား ပါတယ်။
Source : Joo Jin-mo thinks Zhang Ziyi liked him
Musa (武士 무사) or The Warrior in English, isa2001 Korean epic film
Jang Dong-gun Hollywood
picture to premiere in Korea
Jang Dong-gun ရဲ့ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်
မင်းသား Jang Dong-gun (ဒါရိုက်တာရင်) ရဲ့ The Warrior's Way အမည် ရှိတဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်ကို USA နဲ့ ကိုးရီးယား တို့မှာ December3တွင် တပြိုင်နက် ထဲပြမယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun Hollywood picture to premiere in Korea
Actor Lee Byeong-heon wins Seoul Tourism Award
မင်းသား Lee Byeong-heon အား
Seoul Tourism ဆုချီးမြင့်ခြင်း
ကိုးရီးယား ကို tourist အမျာအပြား လာရောက် လယ်ပတ် စေရန် သြဇာ သက်ရောက် စေခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး မင်းသား Lee Byeong-Heon ကို Seoul Municipal အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ Seoul Tourism Award ဆုချီးမြင့် ခဲ့ပါတယ်။
Source : Actor Lee Byeong-heon wins Seoul Tourism
Kim So-eun အား ထိုင်ဝမ် တွင်လူကြိုက်များနေခြင်း
မင်းသမီး Kim So-eun ကို Taiwan မှာလူကြိုက် များနေတယ် လို့သိရ ပါတယ်။ KBS TV ရဲ့ Good Days when the Wind Blows ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို July 22 မှာစတင် ပြသ ခဲ့ပြီး နောက်မှာ ယခုလို popular ဖြစ်လာ တာပါ။
မင်းသမီးဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ MBC ရုပ်သံ ရဲ့ Sister of the Sea အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ စတင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး Sad Love Story (2005) နဲ့ The Iron Empress (2009) တို့မှာလည်း ပါခဲ့ ပါတယ်။
Choo Ga-eul အဖြစ် Boys Over Flowers (F4) မှာ အထူး နာမည် ရခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ထပ် ရိုက် ခဲ့တဲ့ The Man Who Can’t Get Married ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း လူကြိုက် များခဲ့ ပါတယ်။
Source : Kim So-eun's popularity rises in Taiwan
Lee Byeong-heon named PR ambassador for California
Lee Byeong-heon အား California ၏
မင်းသား Lee Byeong-heon အား California ၏ PR သံအမတ် အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
September 15, 2010 မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သံအမတ်အဖြစ်ခန့်အပ် ပွဲ အခမ်းအနား မှာ ခန့်အပ်လွှာ ကို California ပြည်နယ် Governor Arnold Schwarzenegger က မင်းသားအား ပေးအပ် ခဲ့ပါတယ်။
Source : Lee Byeong-heon named PR ambassador for California
Kim Ah-joong ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသမီး Kim Ah-joong မကြာမှီ မှာ ပြသမဲ့ Heaven အမည်ရှိ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Kim Ah-joong ဟာ 200 Pounds Beauty အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် နဲ့ နာမည်ကြီး လာတဲ့ မင်းသမီး ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Kim Ah-joong cast as female lead in new medical drama
New York ဖက်ရှင်ပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့
F4 မင်းသား Lee Min-ho
ပြင်သစ် ဒီဇိုင်နာ Christophe Lemaire ဦးစီးတဲ့ Lacoste 2011 အမည်ရှိ ဖက်ရှင် show ပွဲရဲ့ ဖိတ်ကြား ချက် အရ၊ ၄င်းပွဲကို F4 မင်းသား Lee Min-ho တက်ရောက် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho attends fashion show in New York
Lee Hyo-lee songwriter held in custody for plagiarism
Lee Hyo-lee ရဲ့ခိုးချသီချင်းများကိစ္စ
2010 April က အဆိုတော် Lee Hyo-lee ရဲ့ H-Logic အမည် ရှိတဲ့ album ထွက်လာ ပါတယ်။ သီချင်း ထွက်ပြီး မကြာခင် မှာ အများရဲ့ ထောက်ပြချက် အရ အောက်ပါ သီချင်း များဟာ ခိုးချ ထားတဲ့ သီချင်းတွေ ဖြစ်နေ ကြပါတယ်။
"I'm Back" [Canadian indie-singer Lil Precious' track "So Insane"]
"Memory" [British Trip-Hop group Second Person's track "The Alphabet Song"]
"Feel the Same" [Canadian indie-singer Melanie Durrant's "Feel the Same"]
"Swing"[(Greek composer Mikis Theodorakis' "To treno fegi stis ohto"]
"Bring it Back" [Canadian girl-group Cookie Couture's "Boy Bring it Back"]
"How Did We Get" [Jason Derulo's "How Did We"]
Lee Hyo-lee ဟာ၎င်း ကိစ္စ ဖြေရှင်း မပြီးမချင်း သီချင်း ဆိုခြင်း လုပ်ငန်း အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်း ထားလိုက် ပါတယ်။ သီချင်းရေး ဆရာ Bahnus Vacuum @ Lee ကို သီချင်း ရေးခ won 29 million Lee Hyo-lee တို့ဖက်က ပေးထား ရတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
Lee Hyo-lee နဲ့ သူမရဲ့ agency Mnet Media တို့က တရား စွဲပြီး ရဲသို့ တိုင်ကြား ထား တဲ့အတွက် သီချင်းရေး ဆရာကို ဖမ်းထား ပါတယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ ဆိုရင် အဆိုတော် အချို့ သီဆိုမှု ရပ်ထား ရပြီး၊ တေးဖွဲ့သူ အချို့ လည်း အချုပ်ထဲ ရောက်နေ လောက် ပါပြီး။ (တောင်းပန် ပါတယ်၊ အမှန်အကန် ပါရမီ ရှင်တွေကို လေးစါး ပါတယ်)
Source : Lee Hyo-lee songwriter held in custody for plagiarism
Moon Geun-yeong joins Jang Geun-seok for new drama
Moon Geun-yeong အွန်စောငယ် ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသမီး Moon Geun-yeong (23) ဟာ Mary Stayed Out All Night လို့အမည် ရှိတဲ့ ကာတွန်း ဇာတ်လမ်း ကိုမှီးပြီး KBS TV က ထုတ်လွှင့်မဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Jang Geun-seok နဲ့တွဲဖက် ပါဝင်မယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Moon Geun-yeong joins Jang Geun-seok for new drama
မင်းသား Cha Seung-won
ဂျပန်တွင် Fan Meet ပြုလုပ်ခြင်း
ကိုးရီးယား ထိပ်တန်း သဘာဝ မင်းသား Cha Seung-won ဟာ September 24 က ဂျပန် နိုင်ငံ Tokyo မြို့မှာ သူ့ သရုပ်ဆောင် သက်တမ်းရဲ့ ပထမ ဦးဆုံး Fan Meet ကို ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
Source : Cha Seung-won to hold fan meeting in Japan
2PM အဆို အဖွဲ့ ကနေ နှုတ်ထွက် သွားတဲ့ Jae-bum ဟာ ဘာ စကားမှ မပြောပဲ ရေငုံနှုတ် ပိတ်ပြီး ဇာတိ USA သို့ ပြန်သွား ခဲ့ပါတယ်
Jae Bum (23) ဟာ တတိယ မျိုးဆက် US နိုင်ငံသား ကိုရီးယာ လူမျိုး (အဖိုး US နိုင်ငံသား မှဆင်းသက် လာသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဟာ Edmonds, Washington, USA တွင်မွေးဖွား ကြီးပြင်း ခဲ့ပါတယ်။ ကိုးရီးယား JYP Entertainment က USA မှာပြုလုပ် တဲ့ လူရွေးပွဲ မှာအောင်မြင် ခဲ့ပြီး ၄နှစ် trainining ဆင်းပြီးနောက် 2PM အဆိုအဖွဲ့ ရဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ကျော်ကြား လာခဲ့ ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခံစားချက် တွေကို သူငယ်ချင်း တသိုက်သာ ဖတ်နိုင်တဲ့ Myspace ထဲမှာ 2005 က ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ထိုရေးသား ချက်တွေကို September 4, 2009 မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မှ သစ္စာ ဖေါက်ပြီး internet ထဲမှာ ဖေါ်ထုတ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် အမျိုးမျိုး အပြစ်ပြော ခံရပြီး 2PM အဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက် ခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ပျက် ခဲ့ပုံက အတော် ခံပြင်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သီချင်း ဆိုတယ်၊ ကတယ် ဆိုတာ ဘယ်မှာ လုပ်လုပ် ရပါတယ်။ လူလည်း သေသွားတာ မဟုတ် ပါဘူ၊ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့ ဘဝကို အသစ် ကနေ ပြန် စဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော့ agency ဟောင်း ကတော့ ကျွန်တော့ ကို နစ်နာ စေလိုတဲ့ သဘော မရှိခဲ့ ပါဘူ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမထား ပါဘူ။ ကျွန်တော့ကို စောင့်မျှော် နေတဲ့ Fans တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် လို့ Jae-bum ကပြောသွား ပါတယ်။
Source : Former 2PM Singer Breaks Silence
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/500/hot-news-23-october-2010
Hot News-01 Oct 2010
Posted By - Ko Ko - October 1, 2010
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/499/hot-news-01-oct-2010
Rendering time 0.0200 sec **
9572e796cece454210a20a2f2ada77af - January 22, 2018 - 6:57:35 am